I-Boeing 757 enabantu abangaphezu kwe-120 abakhwele umhlaba kwisikhululo senqwelomoya saseGuyana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziziiGuyana » I-Boeing 757 enabantu abangaphezu kwe-120 abakhwele umhlaba kwisikhululo senqwelomoya saseGuyana
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziziiGuyana • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Abantu abathandathu benzakala emva kweBoeing 757 enabantu abangaphezu kwe-120 ababekhwele ebhodini kwisikhululo senqwelomoya saseGuyana eGeorgetown, utshilo amagosa. Inqwelomoya yayisendleleni isiya eCanada.
Ngaphantsi kwemizuzu engama-20 emva kokumka, i-jet eboshwe eToronto kuye kwafuneka itshintshe ikhosi kwaye ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya ngenxa yokungasebenzi kakuhle komoya. Iqela labasebenzi laqaphela ingxaki ngesixokelelwano samanzi saza sanyanzeleka ukuba sibuyisele inqwelo moya eCheddi Jagan Airport.
Nangona kunjalo, ukufika okungxamisekileyo kukhokelele kwingozi, njengoko iBoeing 757 yagqitha kumgaqo weenqwelo moya yaza yabetha umqobo. Esi sehlo sikhokelele ekuvalweni okufutshane kwesikhululo seenqwelomoya, kodwa ngoku siphinde savulwa, ngokweendaba zasekhaya.
Iifoto ezimdaka ziye zajikeleza kwimithombo yeendaba zentlalo ezibonisa indawo yengozi. Enye yee-injini zomoya zibonakala zonakele kakhulu emva kokuba zibethelelwe ngocingo.
Abantu abathandathu kwabali-128 ababekhwele kwinqwelomoya, kubandakanya nabasebenzi, bafumana ukonzakala okungasongelanga, utshilo umphathiswa weziseko ezingundoqo, uDavid Patterson, njengoko kuchaziwe yimithombo yeendaba yalapha.
Inqwelomoya ineminyaka eli-19 ubudala, ngokweZazisi zeNdiza. Esi siganeko siza kungekudala emva kokuba iBoeing 737 MAX 8- inqwelo moya yeli qela-yengozi eIndonesia, yabulala bonke abantu abali-189 ababekhwele kuyo.